Labels: short story, အတွေး
ခင်ဗျားက စကားပြေလည်း အရေးကောင်းတာပဲ
ခင်ဗျားဆီကို ကျနော်အမြဲရောက်ပါတယ် ခင်ဗျားတို့ ဆီက
ကဗျာ အတွေးခွန်အားတွေကို အတုယူနေရပါတယ်...
ဒီဆောင်းပါးကို ကျနော့်ရဲ့ ဗေဒါလမ်းဂျာနယ်မှာ အရမ်းသုံးချင်တာပဲဗျာ...ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်စာမျက်နှာကနည်းလို့ အခက်တွေရ့တယ် ခင်ဗျားလည်းကျနော့်ဆီလာလည်လို့ ကျေးဇူး...
ကဗျာဆရာလေး ကောင်းကင်ကိုရေ့့့ 
အဲ့လိုပဲ တစ်ခါတုန်းက တွေးမိဖူးတယ်ဗျာ..
တွေးရင်းတွေးရင်း အဲ့ဒီ့သံသရာလည်တဲ့နားအရောက်မှာ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်ပြီး ပြီးသွားတာပါပဲ...
ဘုရားသခင် ဆက်ပြောမည့် ဒေသနာကား...
W W W...wait wait wait!!!
I want to send to my friends via email.
Pls, allow me...
ကောင်းခန်းရောက်မှ မီးပျက်သွားရတယ်လို့...ဘုရားသခင် ဘာပြန်ဖြေမလဲဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ :)
ွGod ခဏဖြစ်သွားခိုက် ပြီးရင် ဘုရားသခင်.blogspot.com ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ အကိုရေ...
ဆရာလေး..ဆရာလေး ..ဆရာလေး လို့ ဆိုနေကြတော့ ဆန်ဗန်းကြီးပဲပြေးမြင်နေတာ ဗျ..။)း
ဘုရားသခင်လဲ ရွှေပြည်ကြီးကိုရောက်မှ ..
www.=World .Wide . Wait
ကောင်းကင်ကို ရေ သူများရေးသလို ရေးချင်ပေမယ့် မရေးတတ်လို့ ခင်ဗျားရဲ့
အက်ဆေးနဲ့ သရော်စာတွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ မရေးဖြစ်တဲ့
ဘလော့သေ ထဲ ကို ကူးယူလိုက်ပါတယ်
နောက်ထပ်လဲ အသစ်လေးတွေ ရေးနိုင်ပါစေဗျာ.......
ကောင်းလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အတွေးရော အရေးရော အရမ်းကို ထိမိလွန်းတယ်။ သဲတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာ့တပည့်လို့ ပြော၇တာတောင် ရှက်လာပြီ။ ဆရာက အ၇မ်းတော်နေပြီး တပည့်က အသုံးမကျလို့လေ။:P
ပို့စ်လေးရေးထားတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။..
ညီရေ့ အလည်လွန်နေလို့ ခုမှ လာဖတ်မိတယ်
ကောင်းလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး
ကောင်းလွန်းတယ်ဗျာ.. အတွေးအရေး.. အားလုံးဗျာ..
ထိထိမိမိနဲ့ ပြကွက်တွေလို တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်.. နောက်ဆုံးမီးပြတ်လိုက်တာ မိုက်တယ်ဗျာ.. နှစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်တယ်ဗျာ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်လို့ ခေါ်ပြလိုက်သေးတယ်..
လူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ညှိုးထိုးနိုင်တဲ့ အခြေ ရောက်မှ ဖြစ်မယ်။
တကယ့်ကို ခံစားရလွန်းလို့ ရေးတဲ့စာဆိုတာကို စကားလုံးတွေက ပြောပြနေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက ပြဿနာကတော့ ကြွက်ချေးထဲ ဆွမ်းဆန်ရောတာပါပဲ..။ ဆွမ်းဆန်ကလည်း ကြွက်ချေး လုပ်မရ..ကြွက်ချေးကလည်း ဆွမ်းဆန်ဖြစ်မလာ။ အဲဒီအခါ ဆွမ်းဆန်တွေက ထွက်ထွက်ပြေးးး ဒီလိုနဲ့.....
သင်၏ရန်သူတို့ကို ချစ်ကြလော့။ သင်တို့ကို ကျိန်ဆဲသော သူတို့ကို မေတ္တာပို့ကြလော့၊ သင်တို့ကို မုန်းသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုကြလော့။ သင်တို့ကို နှောင့်ရှက် ညှဉ်းဆဲသော သူတို့ အဘို့ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းကြလော့။ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅း၄၃-၄၄
ကျမတို့ အားလုံး ညှဉ်းဆဲခံနေရသော်လည်း ညှဉ်းဆဲသော သူများအား တညီတညွတ်တည်း ဝိုင်းဝန်းမေတ္တာပို့ကြရအောင်လား။